Maamulka Dooxada Shabeele oo Howlgalo ku qaaday Jidgooyooyin Gobolka Hiiraan – SBC
Maamulka Dooxada Shabeele oo Howlgalo ku qaaday Jidgooyooyin Gobolka Hiiraan
Maamulka Doxada Shabeele ee gobolka hiirana ayaa waxa alagu soo waramayaa in ciidamadooda Howlgalo ay ka sameeyeen halkasi ay ku qaadeen in ka badan 20 Isbaaro oo taalay deegaanada ay gacanta ku hayan.
Mid ka mid ah Saraakiisha Sar sare ee Maamulka Dooxada Shabeele ayaa SBC International u xaqiijiyay in ay qaadeen isbaarooyinkaasi dhamaantood kuwaas oo tuunsanaa deegaamada bacaha ilaa Kalabeyr.
Waxa uu intaasi ku daray in in ka badan 40 qof oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii sida sharcidarada ah jidgooyooyinka u dhiganayay ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana iminka ay ku jiraan xabsiyada maamulkaasi .
Wadada isku xirta gobolada dhexe ayaa ah mid Halbowle u ah isku socodka iyo isku xirka gobolada Dalka sida kuwa Koonfureed iyo kuwa Waqooyi iyo bari, waxaanay aheyd markii mudooyinkii ugu dambeeyay laga deyrinayay kooxo hubeysan oo halkaasi jidgooyooyin dhigta.
Sikastaba ha ahaatee howlgadalada Maamulka Dooxada Shabeele uu halkaasi ka sameeyay islamarkaana ku soo qabqabtay kooxahan iyo isbaarooyinkoodii ayaa noqonaya mid siweyn wax uga bedela xaaladaha isu socod ee deegaanadaas.